Cameroon: Kurambidzwa kwebasa rejairi wekambani Camair Co kunokonzera kutsamwa kwaVaMutungamiri Motaze - TELES RELAY
HOME » mwe »Cameroon: Camair Co pilot kuchetedza kushanda inokonzera Vashumiri Motaze hasha
Mutungamiri Louis Paul Motaze pamushanyi wekushanda kuDouala akazopedzisira asamanikidzwa kudzokera kuJaoundé panzvimbo nemugwagwa, izvi zvinotevera kushungurudzika kwenyika yepasi.
Maererano nehumwe ruzivo rwakatorwa nepepanhau reInternet Gazeti237, Louis Paul Motaze akatora mugwagwa Douala-Yaoundé manheru mangwanani mushure mekushanyira kwemaawa 24 mumutoro wezvemari.
Zvechokwadi, yakasvika kare zuro China paDouala International Airport kuti inotora ndege kubva kunyika yendege yenyika, kuenda kuJaounde, inotsanangura vatinoshanda navo, Gurukota reMari vachamirira pasina. Kutarisira kuti nhengo yehurumende inofungidzirwa kwenguva yakareba uye yakasarudza kubuda nokutora nhamba yemugwagwa wenyika 3 Douala-Yaoundé kwete pasina kugumburwa pamamiriro acho ezvinhu.
Imwe nyanzvi yakatsvaga magazini inoongorora kuti nguva refu yakamirira yakakonzerwa nekushayikwa kwechifambiso chebasa rekushandisa air air carrier. "Vakatasva vose vakange varipo, uye hakuna munhu kuti atitsanangurire kuti nei kukwira kwakanonoka apo ndege yakanga iri padenga. Yaiva apo pandakaenda kune avo vakagadzirira kuti mumwe wavo akandiudza kuti rwendo rwacho rwakanonoka nokuti mutyairi wacho haana kusvika. Mubati wangu akanga akatsamwa kuteerera izvi zvinotsanangurwa anoona asina kuchenjera. Akasarudza kutora nzira " ichaenda pane imwe nzvimbo kuva Cameroun-Info.Net. Vatungamiri vekambani havana kutaurira kusvika ikozvino pamusoro pekukanganisa.
The rezvemari akanga achishanyira Douala Wednesday 15 May 2019 ari akapoteredza musangano pamwe private nemauto panyaya zvisungo yepfuma mari pamusika of Bank of Central African States (BEAC). Nokuti mashandiro ichi, yakanyorwa kota 2è chisungo pachataurwa purogiramu iyo hurumende anoda vanounganidzira 150 3 mabhiriyoni CFA mafranc mu maitikiro, Louis Paul MOTAZE akabata chinhu exchange vokubhengi uye nevamwe vatengesi panguva La Falaise Bonapriso district, highlights Gazeti 237
Nyaya iyi yakatanga kutanga 237 ACTU
Trump inonoka kutengesa motokari mumashizha kuti zvibvumirane neJapan neEurope - New York Times